प्रतिभा निकेतनमा नेतृत्व चयन::Hamrodamak.com
प्रतिभा निकेतनमा नेतृत्व चयन
दमक,१७ कार्तिक / दमकको पूरानो साहित्यीक संस्था प्रतिभा निकेतनको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । शनिवार सम्पन्न साधारणसभाले निकेतनको अध्यक्षमा पुनः मेघराज तिम्सिना चुनिए ।
त्यस्तै, उपाध्यक्षद्धयमा गङ्गाधर कट्टेल र कृष्ण दङ्गाल, सचिवमा चन्द्र बिन्दु बराल सहसचिवमा प्रकाश भण्डारी र कोषाध्यक्षमा भवकृष्ण खतिवडा छन् ।
यसैगरि समितिको सदस्यहरुमा भुमिप्रसाद दाहाल, चुडामणि अधिकारी, धनञ्जय बाँस्कोटा ,रामप्रसाद भण्डारी र कृष्णभक्त सुवेदी चुनिएका छन् । साधारणसभाले मोहन प्रसाद भण्डारी, प्रा. डा. गोविन्दराज भट्टराई , डा. तुलसी भट्टराई, डा. गोपाल भण्डारी र खेमलाल पोखरेल सम्मलित एक सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष तिम्सिनाले बताएका छन् ।